Beach Nai-Harn ~ Journey-Assist - Ny tsara indrindra ao Phuket!
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Beach Nai-Harn
Beach Nai-Harn - Phuket
Ny fijerena ny Pantai Nai-Harn
Nai Harn Beach amin'ny sari-tany
Weather in Nai Harn Beach
Saripika sy horonan-tsary any Nai Harn Beach
Ny trano fandraisam-bahiny akaikin'izany
Valiny ho an'ny Nai Harn Beach (valin'ny Google)
Nana Harn Beach Reviews (Tripadvisor.com)
Io tora-pasika io azo antsoina hoe iray amin'ny tsara indrindra any Phuket!
Tsy misy feon'olom-borona tsy lavitra eo. Manakaiky eo dia misy ala kely faritry ny kaontenera. Vitsy ny hotely eto ary izay lafo ihany no lafo. Ampy tsara ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina. Lehibe ny tora-pasika.
Safidy tsara dia ny mandeha eto amin'ny bisikileta iray raha mipetraka any Rawai. Handeha 10 minitra eo ho eo ny mandeha amin'ity tranga ity. Teo akaikin'ny Nai Harn dia tempoliny sy dobo lehibe iray.
Betsaka ny olona eto, fa betsaka ny toerana ho an'ny rehetra. Amin'ny habeny ny fasika. Haingana ny fidirana amin'ny rano. Azo atao ny milomano na dia kely aza ny rano. Indraindray misy onja mahery - amin'ny fotoana toy izany dia voarara ny milomano. Ary amin'ny ankapobeny, eto amin'ity tora-pasika ity, tsy dia mahalana rehefa milamina ny rano, noho izany, miambena amin'ny ankizy kely!
Modely ny fotodrafitrasa fa misy toerana tokony hisy. Makashnitsy sy kafe. Toilet ho an'ny 10 Baht (2019). Sunbeds sy elo iray isaky ny olona 100 Baht. Misy koa ny alokaloka voajanahary avy amin'ny hazo.
Miatrika ilay tora-pasika io koa ny mpiambina. Misy tsara ny toerana fijanonana fiara sy bisikileta alokaloka.
Torapasika tena mendrika ho fialantsasatra amoron-dranomasina mahazatra miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Ny fiposahan'ny masoandro avy eto dia mahafinaritra fotsiny!
Minus kely kely. Rehefa faran'ny herinandro, dia matetika tonga eto amin'ity tora-pasika ity ny vazaha miaraka amin'ny biby fiompiny efatra, izay mamela trace ny fiainany :). Nefa vetivety dia nanjavona haingana izany rehetra izany. Ny fikorisana dia hita tsara.
Address: Rawai, Distrikan'i Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/hx5EAViKRAXhtNcX6
Nai-Harn Beach amin'ny sari-tany
Weather on the beach Nai-Harn Beach
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany dia afaka mahita ny toetr'andro ankehitriny any amin'ny Pantai Nai-Harn. Ao amin'ny faran'ny fidirana ny zoro dia fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Ny fanindriana na ny paompy roa amin'ny fifanarahana rehetra dia afaka mahita hoe inona no toetr'andro amin'izao fotoana izao, na hahita ny vinaviny amin'ny ho avy.
Ireo kisary ao amin'ny sarintany dia manondro mazava ny toetrandro any amin'ireo faritra ireo.
Saripika sy horonan-tsary any Nai-Harn Beach
Amoron-dranomasina Nai-Harn Beach Hotels
Valiny ho an'ny Nai Harn Beach (Hevitra momba ny Google)
Nana Harn Beach Reviews (Tripadvisor.com))
Ny tora-pasika no iray amin'ny tsara indrindra na tsara indrindra ao Phuket! Ampy ny fotodrafitrasa! Ny sakafo manodidina dia matsiro sy lafo. Sehatra ampy ho an'ny rehetra. Mifanaraka amin'ny morontsiraka fasika, ala kely iray manontolo ary ahitra milentika tsara, izay azonao atao tsara ny mandamina na dia amin'ny fitsangatsanganana faran'ny herinandro faran'ny herinandro aza.
Parking eo akaiky eo. Eo akaikiny koa dia misy farihy, misy tempoly, ary amin'ny ankapobeny dia tena mendrika sy milamina tsara ny zava-drehetra. Ny atmosfera dia malefaka ary misy fety ihany
Mazava ny rano .. ny loko dia amin'ny sary eto amin'ity pejy ity. Ny onja dia mba ilaina ihany :). Fa raha izany no tokony hatao, raha miaraka amin'ny ankizy, dia mila mikarakara ianao.
Ranomasina mahafinaritra! Hiverina aminy indray isika, toy izay ho any Phuket.
Hampangatsiaka! Mila mandeha ??
Salanisan'ny salanisa 0 / 5. Isan'ny isa: 0
01.06.2020 / fanehoan-kevitra mankany Belarus tsy misy
25.05.2020 / Fanehoankevitra 2 ao Irlanda